The Irrawaddy's Blog: နိုင်ငံတကာဘဏ်တခုရဲ့ မြန်မာပြည်အကြောင်း သုံးသပ်ချက်
နိုင်ငံတကာဘဏ်တခုက သုံးသပ်တင်ပြထားတဲ့ မြန်မာပြည်အကြောင်း သုံးသပ်ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ရက်စွဲ - ၉ ဧပြီ ၂၀၁၄
အဆုံးမှာတော့ သုံးသပ်ချက်ရေးသားသူ Suan Teck Kin (UOB ဘဏ်၊ အကြီးတန်းစီးပွားရေးပညာရှင်) ရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို ဖတ်ရှုရပါမယ်။
မြန်မာ - ခေတ်သစ်တစ်ခုသို့ကူးပြောင်းခြင်း
 ဆယ်စုနှစ်လေးစုကြာ အထီးကျန်စွာ ရပ်တည်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံသည် ၄င်း၏အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနောက်သို့
အမီလိုက်ရန်နှင့် ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်း ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို
မျှော်ကိုးသည့် မူဝါဒလမ်းစဉ်များကို အားပြု၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးရပ်တည်ချက်တစ်ရပ်ကို စတင်ကျင့်သုံးလာခဲ့သည်။
 သိသားထင်ရှားသည့် အကျိုးဆက်တစ်ခုအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသည် နိမ့်ကျခဲ့သည့် အနေအထားတစ်ခုမှ
ပြန်လည်အားယူနိုးထလာနိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နံမှုများလည်း နိုင်ငံအတွင်းသို့ စီးဝင်လာခဲ့သည်။
တဆက်တည်းမှာပင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုပြဿနာများနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ တစ်ဖက်စောင်းနင်းအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍
စိုးရိပ်ပူပန်စရာများ ရှိကောင်းရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းသည် ဆက်လက်မြင့်တက်ရန် အလားအလာကောင်းများ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
 နိုင်ငံ၏ပထ၀ီအနေအထား၊ လူဦးရေအခြေအနေ၊ လျှံပယ်ပေါများသည့် သဘာဝသယံဇာတများ နှင့် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ကင်းကွာနေခြင်း စသည့်အခြေအနေများက ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို့အား ဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။
သို့သော် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအရှိန်ကိုထိန်းထားရန်နှင့် အခြေခံအဆောက်အဥဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်
ငွေကြေးဖောင်းပွမှုပြဿနာများကို အမြဲလေ့လာကြပ်မတ်ရန်မှာ အစိုးရအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကျင်းပသည့် နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကျင်းပခဲ့သည့်
အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှတဆင့် ဆယ်စုနှစ်လေးစုကြာ အထီးကျန်ရပ်တည်ခဲ့မှုနှင့် စစ်အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှ
ပြန်လည်ရုန်းထွက်နိုးထလာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်မှ အရပ်သားဒီမိုကရေစီစနစ်သို့
အသွင်ကူးပြောင်းရာတွင် စီးပွားရေးပွင့်လင်းလာမှုနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနည်းလမ်းများကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သည့်အတွက်
ထိုအချိန်မှစ၍ နိုင်ငံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် စီးပွားရေးမူဝါဒများပြောင်းလဲခြင်းတို့သည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် လျင်မြန်စွာ
ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရှေ့ရှုသည့် ဥပဒေများ ထုတ်ပြန်လာနိုင်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ၂၀၁၂
ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ကုမ္ပဏီများသည်
မြန်မာနိုင်ငံအား အာရှ၏ နောက်ဆုံးလက်ကျန် စီးပွားရေးနယ်မြေသစ်အဖြစ် စိတ်အားထက်သန်စွာ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၄ ဘီလီယံရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄
ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၆ ဘီလီယံအထိ ၃ ဆနီးပါး တဟုန်ထိုးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ
ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ အဆိုအရ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄
ဘီလီယံအထိရှိရမည်ဟု သတင်းဖော်ပြချက်များအရ သိရှိရသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ ကို အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့ခြင်းနှင့် ၂၀၁၄ တွင်
အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးကို လက်ခံခဲ့ခြင်းတို့သည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒေသတွင်းအသိုက်အ၀န်းနှင့်
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကို ဖော်ညွှန်းပြသလျက်ရှိသည်။ ယခုနှစ် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည်
အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသီးသန့်အစည်းအဝေးနှင့် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ ၅ ရက်နေ့အထိ
အာဆီယံဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကို အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါသည်။ နောက်ထပ် အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်
တစ်ရပ်အနေဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အကုန်တွင် အာဆီယံစီးပွားရေးလူ့အဖွဲ့အစည်း (ASEAN Economic Community)
ယခုကောက်နှုတ်ဖော်ပြချက်များသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးပြန်လည်နိုးထသက်ဝင်လာခြင်းနှင့် အလားအလာကောင်းများအပြင်
အဓိကစိန်ခေါ်မှုအချို့ကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့် အချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။
စီးပွားရေးပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို သွက်လက်မြန်ဆန်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ပထမဆုံးအကြိမ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ပြီးချိန်ကတည်းက
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့သည့်အချိန်များကို ပြန်လည်အသုံးချရန်နှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလောကအတွင်း
ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရန်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ စီးပွားရေးမူဝါဒများတွင် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
(အဓိကဆောင်ရွက်ချက်များကို အောက်ပါဇယားတွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်)။ အစိုးရအကြီးအကဲများအနေနှင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသည် တစ်ဦးတည်းအထီးကျန် ဆက်လက်ရပ်တည်ရန်
အခြေအနေမပေးတော့ကြောင်း သတိပြုမိကြသည်။ အထူးသဖြင့် အိမ်နီးချင်းအာဆီယံနိုင်ငံများသည် သိသာထင်ရှားသည့်
စီးပွားရေးတိုးတက်မှုများကို ဖော်ဆောင်နေကြပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကုန်တွင် အာဆီယံစီးပွားရေးလူ့အဖွဲ့အစည်း (ASEAN Economic
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ရက်။
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကွာခြားမှုမျှတစေရန်ပြုလုပ်၊ ကျပ်ငွေဖောင်းပွမှု လျှော့ချရေးစီမံဆောင်ရွက်မှုကို စတင်လုပ်ဆောင်
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၃ရက်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၁၇ရက်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာပိတ်ပင်မှုကို ဆိုင်းငံ့ကြောင်းကြေငြာ
၂၀၁၂ခုနှစ် ဇွန်လ ၇ရက်။
သြစတေးလျမှ ကျန်ရှိနေသေးသော မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ငွေကြေးနှင့်ခရီးသွားလာခွင့်ဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများကို ပယ်ဖျက်
၂၀၁၂ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်။
ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကြာပြီးနောက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်များပြန်လည်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်
၂၀၁၂ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဥပဒေသစ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်၊ ၁၉၉၈ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သောဥပဒေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်။
(ပိုမိုပြည့်စုံစေရန်နှင့် လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ရန် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဥပဒေသစ်ကို မတ်လ ၁၈ရက် ၂၀၁၃ခှုစ်တွင်ထုတ်ပြန်၊ ဥပမာ-နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို ကန့်သတ်ထားသည့်ကဏ္ဍ ၁၁ခုတွင် ၈၀% ထိရင်းနှီးမြုပ်နှံခွင့်ပြု)
၂၀၁၂ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၉ရက်။
အမေရိကန်သမ္မတ Obama ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်လည်ပတ်
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၈
Paris Club အကြွေးရှင်နိုင်ငံများမှ စုစုပေါင်း ကန်ဒေါ်လာ၆ဘီလီယံအကြွေးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိ
၂၀၁၃ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၂ရက်။
အီးယူမှ လက်နက်ခဲယမ်းဝယ်ယူမှုမှလွှဲ၍ ကျန်သည့်ပိတ်ဆို့မှုများအားလုံးကို ဖယ်ရှား
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်။
သီးသန့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လည်ပတ်နိုင်သော ဗဟိုဘဏ်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန် လွတ်တော်မှ မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ဥပဒေကှိပြဌန်း
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှ ဇူလိုင်လ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် မြန်မာစတော့ရှယ်ယာလဲလှယ်မှု စနစ်ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် Securities Exchange ဥပဒေကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုး
၂၀၁၃ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်။
ဆက်သယ်ွရေးဥပဒေသစ်ထွက်ပေါ်လာပြီး အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၃ခုနှစ် တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှ အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုး
၂၀၁၄ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၀ ရက်။
နော်ဝေအခြေစိုက် Telenor နှင့် ကာတာအခြေစိုက် Ooredoo တို့အား ဆက်သွယ်ရေးလိုင်စင်ချထားပေး
အထက်ပါဖော်ပြချက်သည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု (GDP) နှုန်းထားကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုနှိုင်းယှဉ်ချက်သည် ယခင်က အလွန်နောက်ကျကျန်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း
ကြီးမားသော တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုကို ဖော်ပြနေပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏အိမ်နီးနားခြင်းဖြစ်သော အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် လူတစ်ဦးခြင်းဝင်ငွေမှာ ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် ကန်ဒေါ်လာ
၁၀၀၀ နှင့် အထက်တွင်ရှိပြီး၊ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်က တစ်ဦးခြင်းလျှင် ကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀ မှ ၅၀၀အကြားသာရှိခဲ့သည်။ သို့သော်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ စွန်းစွန်းမှစတင်ခဲ့သော်လည်း ၁၀၀၀အောက်တွင်သာဆက်လက်ရှိနေသည်။
အခြားသောနိုင်ငံများတွင် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အထင်ကြီးလောက်စရာ တိုးတက်မှုများကိုတွေ့ရှိရသည်။ အထူးသဖြင့်
တရုတ်နိုင်ငံကိုကြည့်မည်ဆိုလျှင် ယခင်ကအင်ဒိုနီးရှားနှင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ရှိ လူတစ်ဦးခြင်းဝင်ငွေနှင့် သိပ်မကွာခဲ့သော်လည်း
ယခုအခါ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပျှမ်းမျှလူတစ်ဦးခြင်းဝင်ငွေမှာ ထိုနှစ်နိုင်ငံထက်များစွာ ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်သည်။
သို့သော် IMF မှ မတ်လ၂၀၁၄တွင် နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ၀န်ထမ်းများစစ်တမ်းအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုးတက်
ပြောင်းလဲမှုအလားအလာကောင်းများရှိနေပါသည်။ ထိုစစ်တမ်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏တိုးတက်မှုမှာ ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ
အောင်မြင်သော နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုကြောင့် ပိုမိုခိုင်မာလာဖွယ်ရှိသည်ဟုဖော်ပြထားပါသည်။
IMF မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၂/၁၃
တိုးတက်မှုကို ၇.၃% အဖြစ်တိုးမြှင့်ပြင်ဆင်ထားပြီး ၂၀၁၄/၁၅ တွင် အဆောက်အအုံတည်ဆောက်မှုနှင့် ၀န်ဆောင်မှုတိုးတက်မှုတို့
ဆက်လက်ခိုင်မာနေပါက နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးမှာ ၇၃/၄% တိုးတက်လာဖွယ်ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းထားပါသည်။
ထိုကာလအတွင်း IMF မှ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို(၂၀၁၃/၁၄ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ၆.၇% ရှိခဲ့ရာမှ) ၂၀၁၄/၁၅နှစ်ကုန်တွင် မြင့်တက်လာသော
လျှပ်စစ်မီတာခနှုန်းထားနှင့် ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်များအရ ၇% ရှိလာရန်မျှော်လင့်သည်။
လက်ရှိလိုငွေသည် (၂၀၁၃/၁၄တွင် -၄.၈%
ရှိခဲ့ရာမှ) ၂၀၁၄/၁၅တွင် ပြည်ပကုန်တင်သွင်းမှုမြင့်တက်လာမှုကြောင့် GDP၏ ၅.၁% ထိဆိုးရွားလာသည်ကိုဖော်ပြထားသည်။
FDI ဆက်စပ်တင်သွင်းမှုများမြင့်တက်လာခြင်းသည် လိုငွေကိုဖာထေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ခဲ့သော်လဲ ပိုမိုဆိုးစေသည်ကို
အချုပ်အားဖြင့် IMF ၀န်ထမ်းများ၏နောက်ဆုံးစစ်တမ်းအရ မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်မှုမှာ အလားအလာကောင်းများ ရှိကြောင်း
ဖော်ပြထားပါသည်။ သို့သော် နိုင်ငံ၏ ပြင်ပမျှခြေအားနည်းမှုများနှင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဖိအားများကို အသားပေးတင်ပြသွားပါသည်။
ထိုအခြေအနေမှာ အခြေခံအဆောက်အဦပိုင်းဆိုင်ရာတွင် အခြားနိုင်ငံများနောက် ဆယ်စုနှစ်များစွာနောက်ကျကျန်ခဲ့သော
မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သောနိုင်ငံများတွင် ကြုံတွေ့နေကျဖြစ်သည့် အခြေအနေတစ်ရပ်လည်းဖြစ်ပါသည်။
အစိုးရမှကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်အား သီးခြားစီမံမူစနစ် ဖြင့်လည်ပတ်စေခြင်းနှင့်
တည်ငြိမ်မှုရှိသော ငွေလဲလှယ်နှုန်းများက မြန်မာနိုင်ငံသည်မှန်ကန်သည့် လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိနေကြောင်းကိုပြသနေပါသည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိန်ကိုမြှင့်တင်ရန် လုပ်ဆောင်ဖွယ်ရာများစွာရှိနေသည်မှာ မလွဲဧကန်
ဖြစ်သည်။ အခြေခံအဆောက်ဦများချို့တဲ့မှုမှာ ဆိုးရွားသောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၃၂% ကျော်ကျော်သာ
(ထိုအချိန်တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ မြို့ပြတွင်နေထိုင်သောလူဦးရေးမှာ နိုင်ငံ၏ ၅၀.၇%၊
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ၃၁% နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် ၂၀%ခန့်အသီးသီးရှိနေကြပါသည်။) လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ၏
ထက်ဝက်အောက်သာ လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်မူ လူဦးရေရာနှုန်းပြည့်မှာ လျှပ်စစ်မီးရရှိနေပြီး အင်ဒိုနီးရှားတွင်မူ
လူဦးရေ၏ ၇၃%မှာ လျှပ်စစ်မီးရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုတို့ကဲ့သို့သော
အဓိကကျသည့် သုံးစွဲမှုအတိုင်းအတာများသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေခံညွှန်းကိန်းများအရ
သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသည် ကြီးမားသောအားသာချက်များနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်အတွက် အရေးပါသော
- သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆက်နွယ်မှု၊ ခရီးသွားလာရေးကွန်ရက်ဆက်သွယ်မှုနှင့် ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှုတို့အရ တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအကြား အရေးပါသောဆုံမှတ်နေရာတွင်တည်ရှိနေခြင်း
- လူဦးရေ သန်း(၆၀၀)ရှိသော အာဆီယဒေသအတွင်းရှိ လူဦးရေ သန်း(၆၀) ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်နေခြင်း
- (၇၈)ခုမြောက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေနံတွင်းများနှင့် (၄၁)ခုမြောက် အကြီးဆုံးသဘာဝဓာတ်ငွေ့တွင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များစွာကို အလျှံအပယ်ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း
- အခြေခံအဆောက်အဦရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် အခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်ချက်များမှစတင်လုပ်ဆောင်နေခြင်း
ဆယ်စုနှစ်များစွာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများနှင့် ဝေးကွာခဲ့သည့်အနေအထားများကလည်း ယခုအခါ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက် အောက်ပါနယ်ပယ်များတွင် အခွင့်အလမ်းများစွာကို ဖော်ဆောင်ပေးလျှက်ရှိသည်။
- စွမ်းအင်၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဆိုင်ရာ - ရေနံချက်စက်ရုံ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းသွယ်တန်းတည်ဆောက်မှု
- ဟိုတယ်၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ အိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ (အဆိုပါလုပ်ငန်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့လည်ပတ်သူများနှင့် မြို့ပြတွင်အခြေချနေထိုင်ရန် ကြိုတင်မျှော်မှန်းထားသူများအတွက်
- ကုန်ထုတ်လုပ်မှု - တရုတ်နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာမှလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအထူးဆွဲဆောင်လျက်ရှိ
- ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ကဏ္ဍများ (တိုးတက်လာသောဝင်ငွေနှင့် ချိန်ဆသုံးစွဲရေး)
ဈေးကွက်စီးပွားရေးကိုအခြေခံသောဖွံြု့ဖိုးတိုးတက်မှုများကို ဖော်ဆောင်ပေးမည် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများစွာရှိနေသကဲ့သို့
စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် မကြာသေးမီနှစ်များတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေပြဌာန်းခြင်းနှင့်
ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းနှင့် ဗဟိုဘဏလည်ပတ်မှုစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စသည်တို့ကဲ့သို့သော
အထင်ကြီးလောက်စရာလုပ်ဆောင်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး နောင်အနာဂတ်တွင်လည်း ထိုကဲ့သို့သော
အခြားသောစိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲများမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများစီးဝင်လာခြင်းနှင့်အတူကြုံတွေ့ရသည့် အခြေခံအဆောက်အဦဆိုင်ရာ
ထို့အပြင်ချေးငေမျွားကို ထိရောက်စွာခွဲဝေအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်
ငွေကြေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍကိုလည်း လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤတွင်
ပိုမိုလွတ်လပ်လာသည့် ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းထားနှင့် ပိုမိုလွတ်လပ်လာသည့် ဗဟိုဘဏ်လည်ပတ်မှုစနစ်သည်
ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့် နိုင်ငံတကာငွေကြေးဈေးကွက်ဘက်မညီမျှမှုများအား လျှော့ချရေးအပြင် နိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍ
ရာနှုန်းပြည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မှုတို့တွင်လည်း အရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍတွင် ရပ်တည်လျှက်ရှိပေသည်။
Appendix 1 – Myanmar: Key Figures At A Glance
Myanmar: Key Figures At A Glance
Land area 676,578 sq km 40th largest in the world
Population (July 2014 est) 55,746,253 25th largest in the world
Urban popluation 32.60%
Major urban area populations
Yangon 4.259 million
Mandalay 1.009 million
Nay Pyi Taw 992,000 (2009)
Health expenditures 2.0% of GDP (2011) Ranked 189th in the world
Education expenditures 0.8% of GDP (2011) Ranked 172nd in the world
Literacy rate 92.70%
Last election7November 2010
Next election due by December 2015
GDP (nominal) US$55.8 billion FY2012/13 est
GDP (nominal) MMK47,851 billion FY2012/13 est
GDP per capita (nominal) US$876 FY2013/14 est
Real GDP growth rate 7.30% FY2012/13 est
GDP composition by expenditure (2012 est.)
household consumption 80.80%
government consumption 3.80%
investment in fixed capital 16.60%
investment in inventories 0.40%
exports of goods and services 18.90%
imports of goods and services -20.40%
GDP composition by industries (2012 est.)
Inflation rate (avg) 5.50% 2013
Inflation rate (latest) 4.40% Dec 2013
Fiscal Balance (% of GDP) -3.80% FY2012/13 est
Domestic public debt (% of GDP) 22.50% FY2012/13 est
Current account balance (% of GDP) -4.40% FY2012/13 est
Exports US$11.24 billion 2013
Top exports markets (2013; % share): TH 40.1%; CH 26.8%; IN 8.6%; SG 6.1%; JP 4.5%
Top exports (2013; % share): manufacture 40%; agri 24.6%; minerals 9.6%
Imports US$12.04 billion 2013
Top import partners (2013; % share): CH 30%; SG 20.4%; JP 10.2%; SK 10%; TH 9.6%
Top imports (2013; % share): capital goods 47.9%; intermediate 30.3%: consumer 21.8%
Trade Balance -US$799.4 million 2013
Official reserves US$4.6 billion FY2012/13 est
Total external debt US$13.5 billion FY2012/13 est
Total external debt (% of GDP) 24.2% FY2012/13 est
Exchange Rate (MMK per USD) 983.89 end-Feb 2014
Central Bank Policy Rate (%) 10.0 end-Dec 2013
Total deposit MMK14,352 billion Oct 2013
Total deposit to GDP (%) 24.5% 2012/13
Credit to private sector (%y/y change) 55.7% Oct 2013
Private sector credit to GDP (%) 10.2% 2012/13
Inward Foreign Direct Investment US$2.2 billion 2012
Stock of Foreign Direct Investment US$11.9 billion end-2012
Crude oil - proved reserves 50 million bbl Ranked 78th in the world
Natural gas - proved reserves 283.2 billion cu m Ranked 41st in the world
Source: CIA World Factbook; IMF; UNCTAD; CEIC; UOB Econ-Treasury Research est
အကြီးတန်းစီးပွားရေးပညာရှင်၊ United Overseas Bank
Mr.Suan Teck Kin သည် စီးပွားရေးပညာရှင်အဖြစ်၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် United Overseas Bank တွင် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
သူသည် စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မူသုတေသနကို တရုတ်၊ဟောင်ကောင်နှင့်
တရုတ်ပေကျင်း တို့တွင်အဓိကထားဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပြီး အရှေ့တောင်အာရှဒေသမှာ သူ၏ဒုတိယဦးစားပေး
Economic-Treasury Research ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့် သူသည် အဖွဲ့၏ ဈေးကွက်အမြင်များကို
ဘဏ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့နှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံနှင့်အခြားနိုင်ငံများရှိ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မူကိုအသုံးပြုသူများသို့
ကျယ်ပြန့်သောအမြင်ဖြင့် စီးပွားရေးပညာလေ့လာမူနှင့် ရှယ်ယာတန်ဖိုး သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း တို့တွင်
ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာအတွေ့အကြုံရှိပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် တရုတ်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာပြောဆိုနိုင်မူကြောင့်
Teck Kin သည် Bloomberg၊ CNBC၊ Channel News Asia နှင့် Channel 8 တို့ အပါအ၀င် စင်္ကာပူနှင့် နိုင်ငံတကာ
မီဒီယာများမှတွေ့ဆုံမေးမြန်းကို အမြဲလက်ခံဖြေကြားရပြီး အွန်လိုင်းစီးပွားရေးသတင်းဌာနများဖြစ်ကြသော AFX နှင့် Thomson-
Reuters တို့မှ သူ၏စီးပွားရေးအမြင်နှင့် ဈေးကွက်သဘောထားအမြင်များကို မကြာခဏထည့်သွင်းဖော်ပြကြသည်။
Teck Kin သည် ကနေဒါနိုင်ငံ Simon Fraser တက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးပညာရပ် အထူးပြုဖြင့်မဟာဘ့ကွဲိုရရှိထားပြီး စီးပွားစီမံခန့်ခွဲမူဘွဲ့ကိုလည်းရရှိထားသည်။
ထို့ပြငသ်ူသည်CFA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူတစ်ဦးလဲဖြစ်သည်။
Jean Khong Lye Yee
Group Brand Performance and Corporate Communications
Mobile: (65) 9791-2300
DID: (65) 6539-3981
Vero Public Relations Myanmar
Mobile: (95) 943168468